Ameerikaa fi Xaalibaan raawwii walii galtee dhukaasa dhaabuu jalqabuu beeksisan - NuuralHudaa
Ameerikaa fi Xaalibaan raawwii walii galtee dhukaasa dhaabuu jalqabuu beeksisan
Ameerikaa fi Xaalibaan ibsa baasaniin akka jedhanitti, Gamtaan Waraana NATO Ameerikaan durfamu, gareen Xaalibaan fi humni waraana Afgaanistaan, raawwii dhukaasa dhaabuu guuyyoota torbaaf turu har’a irraa kan jalqaban tahuu beeksisan. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Maayik Pompiyoo Jum’aa har’aa ibsa kenneen, “walii galteen dhukaasa dhaabuu kun yoo kan milkaayu tahe, Ameerikaa fi Xaalibaan marii nageenyaa kanaan dura geggeessaa turan goolabuuf, February 29/2020 sanadii walii galtee xumuraa ni mallatteessan” jedhe.
Dubbi himaan Xaalibaan Zabihullaah Mujaahid gama isaatiin, raawwiin dhukaasa dhaabuu kun har’a jalqabamuu mirkaneessuun, sanadii walii galtee xumuraa malleetteessuf gama lamaan irraa qondaaltonni ol’aanoon affeeramuu beeksise. Gareen Xaalibaan kanaan dura mootummaa Afgaanistaan bulchaa jiru waliin gonkuma mariif kan hin teenne tahuu ibsaa ture. Haata’u malee ibsa guyyaa har’aa kanaan, waliigalteen xumura Ameerikaa waliin eega mallatteeffamee booda, qaamota siyaasaa Afgaanistaan hunda waliinuu mari’achuuf qophii tahuus beeksise.
Akkaataa yaadameen raawwiin dhukaasa dhaabuu fi sirni mallattoo waliigaltee xumuraa yoo kan milkaahu tahe, loltoonni Ameerikaa 14,000 fi loltoonni biyyoota miseensa NATO 17,000 Afgaanistaan keessaa kan bahan yoo tahu, gareen Xaalibaan gama isaatiin hidhattoonni biyyoota biroo biyyatti dawoo akka hin godhanne itti gaafatamummaa kan fudhatu tahuu ibsame.
September 22, 2021 sa;aa 4:27 am Update tahe